Ndumodu Mazi Ndubusi Igwekani Nyere Nnamdi Kanu. - Isimbido
Gere akuko a n’uju ya:
Onye ndu otu Biafran Reformation Movement (BRM) bu Mazi Ndubusi Igwekani nyere onye ndu otu Indigenous People of Biafra (IPOB) Nnamdi Kanu banyere nkata ona akpa ka okwusi nhoputa ndi ochichi n’obodo Anambra, nwere ike imeka mberede ochichi dakwasi obodo Anambra, nke ana akpo “state of emergency”.
Mazi Igwekani choro ka ndi Nigeria jide Yerima Shettima onye ndu out (AYCF) ma onwere ihe mere ndi bi n’ugwu ahusa.
Ndi otu (BRM) etinyela ihe nkpobi ukwu n’atumatu onye ndu ndi otu (IPOB) bu Nnamdi Kanu n’atu banyere nhoputa ndi ochichi n;obodo Anambra.
Igwekani onye ndu ndi (BRM) kwuru na Kanu no n’obodo Ebonyi n’akpa nkata nke ga ekpudo odimma n’oganihu ndigbo.
Mgbe Igwekani no n’enwe nkparitauka ya ndi nta akuko n’obodo Enugu, ya bu Mazi Ndubusi Igwekani siri na oku Nnamdi Kanu kporo bu ka egbochie nhoputa ndi ochichi n’obodo Anambra nke bu ihe n’adighi mma.
Osikwa omume Kanu dika nke onye iro ndigbo, Igwekani sin a nhoputa ndi ochichi n’obodo Anambra ga adiriri-ire.
ILE GWO NKA: ISI OKWU: Kwusi Imunye Oku N’OGbaghara Ndi Otu South-South N’enye Wike Ndumodu
Dika okwuru, ya buru na egbochie nhoputa ndi ochichi n’obodo Anambra nke a ga ebute mmanye ochichi n’obodo Anambra nke ana-akpo “state of emergency” n’olu bekee.
Okwuru si, onye obula si na agaghi enwe nhoputa ndi ochichi n’obodo Anambra n’eme nmehge ;Mistake na olu bekee; owee kwusie ike na nhoputa ndi ochichi ga adi ire n’obodo Anambra.
Igwekani si n’obughi mmasi ndigbo na nhoputa ndi ochichi agaghi adi, Kanu ya na ndi n;atu atumatua n’eme ka ndigbo hu ha dika ndi n’agba emegide ndigbo.
Osikwa kedu ka oga adi n’amanyere ndi obodo Anambra ka onye ugwu ahusa chiwa ha? Ya buru na nkea emee oga ewe ihe dika afo iri abuo tupu obodo Anambra anaputa ndi ugwu ike ochichi ahu.
Na chikota Ndubusi Igwekani siri na ndi govamenti etiti “Federal Government” ga etinye gbasara nhoputa ndi ochichi nke n’acho ibia n’obodo Anambra, ya na ahu ike ndigbo bi n’ugwu ahusa, maka ihe mee ndigbo bi n’ugwu ahusa ozo nke ahu ga ebute ihe ozo.
Biko nonyere m n’oge ubochi ozo, ka udo diri anyi niile, aham bu Mazi De Baptist Chukwunyere Obiachu onye akuko n’adinma n’onu.
Tags: Ebonyiigbo presentersIPOBisiisimbido moviesisimbido newskalumbidonnamdipresentersYerima Shettima
UNESCO Akwanyerena Onye Na Eti Egwu Na Ala Aanyi Ugwu, Site N'Inye Ya Ihe Nrite